Iindaba-Indlela i-COVID ewunyuse ngayo ukupakishwa kwebhiya kumaziko asekuhlaleni
Ibheyi yePlastiki yendlela enye
Iibhegi zePlastiki eziphinda zisetyenziswe
Ibhiya kunye nesiselo
I-COVID ikunyuse njani ukupakishwa kwebhiya kwiindawo ezithengisa utywala zasekhaya
Ipakwe ngaphandle kweGalveston Island Brewing Co. kukho iitreyila ezimbini zeebhokisi ezinkulu ezilayishwe ngeepaliti zeetoti ezilindele ukuzaliswa ngebhiya.Njengoko lo vimba wethutyana ubonisa, ii-odolo zangexesha zeetoti lelinye ixhoba le-COVID-19.
Ukungaqiniseki malunga nokubonelela nge-aluminiyam kunyaka ophelileyo kukhokelele i-Saint Arnold Brewing yaseHouston ukuba iyeke ukuveliswa kwepakethe eyohlukeneyo ye-IPA ukuqinisekisa ukuba kukho iitoti ezaneleyo esandleni se-Art Car, Lawnmower kunye nabanye abathengisi bayo abaphezulu.Indawo yokuthengisa utywala yaze yathatha iitoti ezingasetyenziswanga eziprintiweyo kwiibrand eziyekiweyo ngoku ngaphandle kokugcinwa kwaye zabetha iileyibhile ezintsha kuzo ukuze zivelise.
Kwaye e-Eureka Heights Brew Co. ngentsasa yangoLwesibini wakutshanje, iqela lokupakisha laxukuxa ukuze lithathe indawo yebhanti eligugileyo kumatshini walo wokuleyibhela wendlu yokusebenzela ukuze igqibezele iibhiya ezili-16 ezibizwa ngokuba yiFunnel of Love ngexesha lomsitho.
Ukunqongophala kunye nokunyuka kwamaxabiso e-aluminiyam, i-kinks ebangelwa ngubhubhani kwikhonkco lokubonelela kunye neemfuno ezintsha zoku-odola ubuncinci ezivela kumvelisi omkhulu zinokwenza nzima into ebikade iyinkqubo yokuodola ngokuthe ngqo.Abavelisi banolwandiso kwimisebenzi, kodwa imfuno ilindeleke ukuba iqhubeke igqithisa unikezelo mhlawumbi unyaka okanye emibini.Amaxesha okukhokela ekufakeni iiodolo akhulile ukusuka kwiiveki ezimbalwa ukuya kwiinyanga ezimbini okanye ezintathu, kwaye ukuziswa akusoloko kuqinisekisiwe.
Ngamanye amaxesha kuye kufuneke ndithathe iipalethi ezisisiqingatha,” utshilo umphathi we-Eureka Heights u-Eric Allen, echaza imijikelo emininzi yeefowuni enokuzithatha ukuze uqiniseke ukuba ugcwele ngokupheleleyo.Ukuphoswa komhla wokugqibela kwivenkile enkulu ayiyondlela yokukhetha, xa kujongwe ukhuphiswano lwesithuba seshelufu kwindlela yebhiya.
Imfuno yeetoti ze-aluminiyam yayikhula phambi ko-2019. Abathengi bebhiya bezandla babeze kukwamkela iitoti, kwaye abadidiyeli bafumanisa ukuba zifikeleleka kwixabiso eliphantsi lokuzalisa kwaye kulula ukuzihambisa.Zikwanokuphinda zisetyenziswe ngokufanelekileyo kuneebhotile okanye iiplastiki ezisetyenziswa kanye.
Kodwa unikezelo luye lwaxina kanye nje ukuba i-COVID iqale ukuhlasela kwayo.Njengoko amagosa ezempilo kawonke-wonke ayalela ukuba iibhari kunye neetaprooms zivalwe, ukuthengiswa kwedrafti yehla kwaye abathengi bathenga ngakumbi ibhiya enkonkxiweyo ezivenkileni.Ingeniso evela kwintengiso ye-drive-thru igcine izibane zikhanyisa kubathengisi abaninzi abancinci.Ngo-2019, iipesenti ezingama-52 zebhiya ethengiswe yi-Eureka Heights yafakwa enkonkxeni, enye isiya kwiikegi zokuthengisa.Kunyaka kamva, isabelo seetoti sinyuke saya kutsho kuma-72 ekhulwini.
INDLELA ENDE: Indawo yokuqala yotywala yabaNtsundu eHouston iyavulwa kulo nyaka.
Kwenzeka into efanayo nakwabanye abenzi botywala, kunye nabavelisi besoda, iti, i-kombucha kunye nezinye iziselo.Ngokuhlwa, ukufumana unikezelo oluthembekileyo lweetoti kuye kwaba nzima kunangaphambili.
“Isuke kwinto ecinezelayo yaya kwinto ecinezela kakhulu,” utshilo u-Allen, ethetha ngendlela eqhelekileyo kwishishini.
"Kukho iitoti ezikhoyo, kodwa kufuneka usebenze nzima ukuze ufumane loo nto - kwaye uya kuhlawula ngaphezulu," kusho uMark Dell'Osso, umnini kunye nomsunguli weGalveston Island Brewing.
Ukuthengwa kwempahla kuye kwaba namaqhinga kangangokuba uDell'Osso kwafuneka acoce indawo yokugcina kwaye aqeshe ibhokisi erhuqwayo elingana ne-18-wheeler's ukuze akwazi ukugcina nanini na ithuba lokuthenga livela.Emva koko waqesha enye.Akazange enze uhlahlo lwabiwo-mali lwezo ndleko - okanye ukunyuswa kwamaxabiso kwiitoti ngokwazo.
“Bekunzima,” utshilo, esongeza ukuba uvile ukuba ukuphazamiseka kungaqhubeka kude kube sekupheleni kuka-2023. "Akubonakali ngathi kuyahamba."
UDell'Osso naye kwafuneka aqhawule amaqhina kunye nomboneleli wakhe wexesha elide, iBall Corp., emva kokuba inkampani ibhengeze ii-odolo ezinkulu ezincinci.Uphonononga iindlela ezintsha zokukhetha, kubandakanywa abasasazi beqela lesithathu abathenga ngobuninzi kwaye bathengise kwiimveliso ezincinci.
Okongeziweyo, iindleko ezongezelelweyo ziqhube iindleko zemveliso malunga neepesenti ezingama-30 ngetoti nganye, utshilo uDell'Osso.Abanye abenzi botywala babika ukwanda okufanayo.
Ekuhlaleni, iziphazamiso zibe negalelo ekunyukeni kwexabiso ngaphaya kwebhodi malunga neepesenti ezi-4 zeesudi ezipakishweyo ezibethe abathengi kulo Januwari.
Ngomhla woku-1 kuMatshi, iBhola yandise ngokusemthethweni ubungakanani beeodolo ezisezantsi kwiilori ezintlanu - malunga nesigidi setoti - ukusuka kwilori enye.Olu tshintsho lwalubhengezwe ngoNovemba, kodwa ukuphunyezwa kwalibaziseka.
Isithethi sikaScott McCarty sicaphule "imfuno engazange ibonwe ngaphambili" yeetoti ze-aluminiyam ezaqala ngo-2020 kwaye azikapheli.Ibhola ityala imali engaphezulu kweebhiliyoni zeedola kwizityalo ezizintlanu zokupakisha zesiselo e-aluminiyam e-US, kodwa kuya kuthatha ixesha ukuba beze kwi-intanethi ngokupheleleyo.
“Ukongeza, utshilo uMcCarty kwi-imeyile, “uxinzelelo lonikezelo oluqale ngexesha lobhubhani wehlabathi luhlala lucela umngeni, kwaye ukunyuka kwamaxabiso kuMntla Melika okuchaphazela amashishini amaninzi kusaqhubeka nokuba nefuthe kwishishini lethu, kunyuswa iindleko phantse kuzo zonke izixhobo. sithenga ukwenza iimveliso zethu.”
Ubuncinci obuncinci bubeka umngeni othile kwimizi-mveliso yotywala, edla ngokuba mancinci kwaye anendawo enyiniweyo yokugcina into yokugcina.Sele ikwi-Eureka Heights, indawo ekumgangatho ophantsi ebekelwe iminyhadala ngoku igcwele iipaleti ezinde zeetoti ezithengisa kakhulu uMini Boss kunye neBuckle Bunny.Ezi toti ziprintwe kwangaphambili zifika sele zilungele ukugcwaliswa, zitywinwe kwaye zipakishwe ngesandla kwiipakethe ezine okanye ezintandathu.
Amaziko avelisa utywala avelisa inani leebhiya ezikhethekileyo, ezidityaniswa ngemithamo emincinci.Ezi zinto zigcina abathengi bonwabile kwaye, ngokudibeneyo, zonyusa umgca osezantsi.Kodwa azifuni mashumi amawaka ezinkonkxa.
Ukuhlangabezana neengxaki zokubonelela, i-Eureka Heights yanciphisa iitoti eziprintiweyo kwangaphambili ezithengayo ngobuninzi kubathengisi bayo ababini kunye netoti emhlophe engenanto kunye nelogo encinci ye-brewery phezulu - isikhongozelo se-generic esinokusetyenziswa kwiintlobo ezahlukeneyo zebrand.Ezi toti ziqhutywa kumatshini oncamathelisa ileyibhile yephepha kwitoti.
Ileyibheli yathengwa ukuququzelela eyona mitsiko incinci, njengeFunnel of Love, eyinxalenye yomdlalo wecarnival-theme ethengiswa ngokukodwa kwindawo yotywala.Kodwa yakuba ifikile kwi-Intanethi ngasekupheleni kuka-2019, ilebula yacinezelwa ukuba isebenze kwezo kunye nezinye iibhiya ezithengiswa ezivenkileni.
Ukusukela kwiveki ephelileyo, lo matshini wawusele uncamathele amagama angama-310,000.
I-Texans isasela ibhiya, ubhubhane okanye hayi.Malunga neendawo ezili-12 zokuthengisa utywala ezivaliweyo kwilizwe lonke ngexesha lokuvalwa, utshilo uCharles Vallhonrat, umlawuli olawulayo weTexas Craft Brewers Guild.Akukacaci ukuba bangaphi abavaliweyo ngenxa ye-COVID, kodwa inani lilonke liphezulu kancinci kunesiqhelo, utshilo.Ukuvalwa kulungiswe kakhulu kukuvuleka okutsha, wongeze watsho.
Amanani emveliso yasekhaya abonisa umdla oqhubekayo kwibhiya yobugcisa.Emva kokuntywila ngo-2020, i-Eureka Heights yavelisa imiphanda engama-8,600 kulo nyaka uphelileyo, utshilo uRob Eichenlaub, umseki kunye nentloko yemisebenzi.Leyo yirekhodi yotywala baseHouston, ukusuka kwi-7,700 imiphanda ngo-2019.Naye, ulindele ukogqitha irekhodi lakhe lemveliso kulo nyaka.
UDell'Osso uthe uneetoti ezaneleyo ukuze aqhubeke nekota yesine, kodwa oko kuthetha ukuba kungekudala kufuneka aqale kwakhona iodolo ye-odyssey.
Njengazo zonke iziphazamiso ezinkulu, le candemic aluminiyam ivelise amashishini amatsha ukuhlangabezana neemfuno eziguqukayo zeshishini.I-Austin-based American Canning, ebonelela nge-mobile-canning kunye nezinye iinkonzo, ibhengeze ukuba iya kuqalisa ukwenza iitoti kwangoko kule ntwasahlobo.
"Ngo-2020, sabona ukuba ukuphuma koku, iimfuno zabavelisi bezandla zisaza kuxhaswa kakhulu," umseki kunye ne-CEO uDavid Racino uthe kwingxelo yeendaba."Ukuqhubeka nokubonelela abathengi bethu abakhulayo, kuye kwacaca ukuba kufuneka sizenzele eyethu into."
Kwakhona eAustin, inkampani ebizwa ngokuba yiCanworks yasungulwa ngo-Agasti ukuze ibonelele ngoshicilelo olufunekayo kubavelisi besiselo, isibini esithathwini sabo sisebenza ngokuvelisa utywala.
"Abathengi bayayidinga le nkonzo," utshilo umseki uMarshall Thompson, owashiya ishishini lokuthengisa izindlu eHouston ukuze ajoyine umntakwabo, uRyan, kumzamo.
Inkampani iodola iinkonkxa ngobuninzi kwaye izigcine kwindawo yokugcina impahla yaseAustin.Umatshini wokushicilela wedijithali obiza kakhulu kwisiza unako umgangatho ophezulu, we-inki-jet yokuprinta iitoti kwiibhetshi ukusuka kwisigidi ukuya kwisigidi esinye, kunye nokuguqulwa ngokukhawuleza.Enye indawo ethengisa utywala yafikelela kwiveki ephelileyo ichaza ukuba ifuna iitoti ezininzi emva kokuba ibhiya eprintwe kwi-odolo yangaphambili “ibhabhe isuka ezishelufini,” utshilo uThompson.
IiCanworks kulindeleke ukuba zigcwalise iodolo ngokukhawuleza kwisithuba esingangeveki, utshilo.
U-Eichenlaub, wase-Eureka Heights, ubonise ezinye zeemveliso zeCanworks kwindawo yakhe yokuthengisa utywala kwaye wathi uchukumisekile.
I-Thompsons izimisele ukukhula ngesantya esifanelekileyo kwaye ingathathi abathengi abaninzi kunokuba banokusingatha.Banabathengi abamalunga nama-70 ngoku, utshilo uMarshall Thompson, kwaye ukukhula kungaphezulu kokulindelweyo.Uthe inkampani isendleleni yokufikelela kumthamo wayo wokuprinta we-2.5 yezigidi zeetoti ngenyanga ngoMeyi, iqhuba iishifti ezimbini phakathi evekini kunye ezimbini okanye ezintathu ngaphezulu ngeempelaveki.Ithenga abashicileli abatsha kwaye iya kuvula indawo yesibini yase-US ekwindla kunye neyesithathu ekuqaleni kuka-2023.
Ngenxa yokuba ii-odolo zeCanworks ezivela kumthengisi omkhulu welizwe, uThompson uthe unokuvelana nabenzi botywala abahlangabezana nemibandela yokubonelela.
“Asizange siphoswe lixesha elibekiweyo,” watsho, “… kodwa akukho lula njengokuthatha ifowuni nokufaka iodolo.”
Ixesha lokuposa: Apr-08-2022
Imfuno ye-aluminiyam yehlabathi echaphazela isiselo...
I-COVID ikunyuse njani ukupakishwa kwebhiya kwindawo...
© Copyright - 2010-2020 : Onke Amalungelo Agciniwe.Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza
Aluminiyam Ngaba 250ml Sleek, Umgangatho we-330ml, 330ml Itoti, I-12oz ilula, Cidre Sans Alcool, Iinkonkxa zeSoda ezincinci,
Iipcs ezi-2 zeetoti ze-aluminiyam ezithumela ngaphandle eTshayina